दोस्रो चरणमा पुग्ने लक्ष्यसहित खेल्नेछौँ : प्रशिक्षक न्यौपाने (भिडियाे) « Nagarik Khabar
दोस्रो चरणमा पुग्ने लक्ष्यसहित खेल्नेछौँ : प्रशिक्षक न्यौपाने (भिडियाे)
प्रकाशित मिति :6April, 2021 4:03 pm
काठमाडौं । एएफसी कप–२०२१ प्ले अफमा नेपालको त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबले बुधबार श्रीलंका पुलिस स्पोर्टस् क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ ।
त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालामा आर्मीले साँझ ५ः३० श्रीलंका पुलिससँग खेल्नेछ । घरेलु मैदानमा आर्मी जित निकाल्दै प्ले अफको दोस्रो चरणमा पुग्ने योजनामा रहेको छ ।
खेल अघि मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित प्रि म्याच कन्फरेन्समा आर्मीका मुख्य प्रशिक्षक नवीन न्यौपाने पाहुना टिमलाई हराएर अर्को चरणमा पुग्ने योजनामा रहेको बताए । जितका लागि खेल्ने भन्दै उनले आधुनिक फुटबल पस्केर दर्शकलाई खुसी बनाउने लक्ष्यका साथ मैदान उत्रने बताए । प्रशिक्षक न्यौपानेले टिममा केही खेलाडी चोटग्रस्त भएको समेत बताए । यस्तै आर्मीका कप्तान भरत खवासले यस खेलमा टिमले महत्वपूर्ण अवसरको रुपमा लिएको उल्लेख गरे ।
त्यस्तै श्रीलंका पुलिसका प्रशिक्षक झिलाउ अल्पेन्सुले छोटो तयारी भएपनि टिम राम्रो रहेको बताए । टिममा राष्ट्रिय टिमका खेलाडी नभएपनि विदेशी खेलाडी राम्रो भएको उनले बताए । श्रीलंका पुलिसका कप्तान चामिक कुमाराले नेपालमा खेल्न पाउँदा खुसी लागेको बताए ।
पहिलो खेलमा श्रीलंकाको पुलिसलाई हराएमा आर्मीले दोस्रो खेलमा भारतको बेंगलुरु फुटबल क्लबसँग खेल्नेछ । उक्त खेल अप्रिल १४ मा हुनेछ । भारतको बेंगलुरुलाई पराजित गरेको खण्डमा आर्मीले अप्रिल २१ मा हुने प्ले अफको फाइनल खेल खेल्नेछ । यस प्ले अफको विजेताले समूह चरणको समूह ’डी’ स्थान बनाउने छन् ।
समूह ’डी’ मा भारतको मोहन बगान, बंगलादेशको बसुन्धरा किंग्स र माल्दिभ्सको माजिया एन्ड रिक्रिएसन रहेका छन् । यस समूहका समूह चरणका खेलहरु मे १४ बाट सुरु हुनेछ । एएफसीको क्लब लाइसेन्स प्राप्त गरेपछि आर्मीले पहिलो पटक एएफसीको प्रतियोगिता खेल लागेको हो ।
आहा! रारा गोल्डकप : संकटा पहिलो पटक बन्यो च्याम्पियन
पोखरा । आहा ! रारा गोल्डकप–२०७७ को उपाधि संकटा क्लबले जितेको छ । शनिबार पोखरा
एपिएफले जित्याे ललितपुर मेयर्स महिला च्याम्पियनसीपको उपाधि (भिडियाे)
काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल (एपिएफ) ले काठमाडौंमा जारी ‘ललितपुर मेयर्स महिला च्याम्पियनसीप–२०७७’ टी–२० क्रिकेटको
प्रचण्डले भने– केपी ओलीको सरकार धेरै दिन टिक्दैन (भिडियाे)
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ले केपी ओलीको सरकार धेरै दिन